Abakhiqizi basechina abanomoya opholile i-HV-87 abakhiqizi nabaphakeli | Hengrong
umoya isikhwama ngobuningi HV-87
Izikhwama ezinenqwaba yomoya zenziwe ngamapaneli angena umoya kanye nesisekelo esisetshenziselwa ikakhulu ukugcina inqwaba yezingodo nezinkuni zokubasa, inetha lazo lisetshenziselwa ukujikeleza ukugeleza komoya, ukusheshisa ukukhuthaza inqubo yokuthosa neyokomisa.
Umoya ngobuningi izikhwama zenziwe ngamapaneli angena umoya futhi isisekelo sokusetshenziselwa ikakhulu ukugcina inqwaba yezingodo nezinkuni zokubasa, inetha lazo lisetshenziselwa ukujikeleza ukugeleza komoya, ukusheshisa ukukhuthaza inqubo yokunathisa neyokomisa. Zikulungele imikhiqizo edinga ukuphefumula. Amaluphu amane wesikhwama angahanjiswa kalula ngeloli le-forklift futhi isibambo sokufaka ngaphansi kwesikhwama sikulungele imikhiqizo engenalutho.
● Kwisikhwama Somoya Esikhuniwe Ngukhuni, i-mesh ilungele ukusakazwa komoya ukuvikela umbala nesimo esomile sokhuni ngesikhathi kugcinwa. Umklamo oyingqayizivele wokuphefumula uvumela amahlathi ukuba afinyelele isizini ngokushesha ngangokunokwenzeka phakathi nenqubo yokoma. Futhi yisixazululo esonga izindleko sokomisa, ukugcina nokuhambisa izinkuni zokubasa.
● Umoya ngobuningi izikhwama zithandwa kakhulu kufayela le- ECanada yokugcina nokuhambisa imikhiqizo eminingi. Ziphinde zinikeze imakethe engcono embonini yezinkuni. Ziyasizakala ngemikhiqizo ekusebenzeni kokuphefumula futhi zilungele ukugcinwa kanye nezinto zokuhamba ukugwema ukuphinda ziphindwe ngaphambi kokuthengisa kabusha izinkuni zakho ezomisiwe.
umoya isikhwama esikhulu
Cha IGAMA Ukucaciswa DIMENTION Inani
1 Thayipha u I-100% ye-virgin PP evunyelwe i-170gsm, 90x90x140cm 1
2 2 isichibi I-100% ye-virgin PP evunyelwe i-170gsm, W = 90cm L = 90cm 2
3 i-duffle ephezulu pp anezikhala 40g / ㎡ ， W = 90cm L = 80cm 1
4 bopha ibhande PP, L = 120cm 1
5 ibhande lokuphakamisa 40g / m W = 7cm 4
6 ispout esingezansi PE 90g / ㎡, camera Φ45x50cm 1
7 idokodo T = 200micron W = 90cm L = 80cm 1
1 nge-UV （2%） YELAPHA ESIKHWINI umbala omhlophe
2 Ibhande lokuphakamisa ububanzi obungu-7cm elimhlophe ibhande lokuthunga eligcwele
Ukupakisha Pallet noma amabhele
40HQ 10000PCS ngo-40HQ:
Ukwenza indlela: uhlobo lwesikwele, i-duffle ephezulu, ukukhipha okuphansi, ukuthunga ibhande lokuphakamisa uhhafu emzimbeni ngu-100cm, umbala omhlophe, ukuphathwa kwe-UV
Igama Umoya Bulk Bag HV-87
Ubukhulu 90 * 90 * 140cm
ukulayisha umthamo 1000kg
Ubuningi 13 * 14/14 * 14/14 * 15
uhlobo lwendwangu Iphaneli engu-4 / U + 2panel
Ngezansi ukukhipha okukodwa / ukukhipha i-pajama / inkanyezi ukuvala umcabango / ukuvuleka ngokuphelele
IBhande 4 ohlangothini umphetho
imibhalo Ilokhi ye-A4 commonzip maphakathi
Ukuphathwa kwe-UV inyanga ejwayelekile / 1 / 2month / 3month / uhhafu
Umugqa we-PE Cha
Ukwenza indlela indlela yokwenza: U +2, ophakamisa ibhande emzimbeni ungama-90cm, i-duffle ephezulu (isiketi), isikhwama sokushaja phansi, idokhumenti eli-1, ngaphezulu kokuthunga okuvalekile, okuphathwa nge-UV
ukusetshenziswa u-anyanisi, amazambane, iphinathi, isanqante, isithombo, amaklabishi, ukulima izinkuni nokunye.
Intengo yethu incintisana kakhulu, ngoba sinamandla amakhulu okukhiqiza, ngakho-ke kunganciphisa izindleko zomkhiqizo.
Sigcina izinto eziningi esitokweni, ngakho-ke intengo izinzile isikhathi eside.
Senza ibhizinisi lesikhwama se-PP iminyaka engaphezu kwengu-16 ubudala, futhi ngaphezu kwe-1000kinds yezikhwama ezahlukene emhlabeni, sineqembu elikhethekile lokuklama elingenza umklamo omuhle ngokuya ngemfuneko yakho. Ngakho-ke intengo iyancintisana ngaphansi kwekhwalithi enhle kakhulu.
3. Ukulawulwa kwekhwalithi
Sinendlela yokulawula eqinile eqinisekisa ukuthi zonke izingxenye zesikhwama zicacile kuwe.
Ukulawulwa kwethu kwekhwalithi kuqinile, senza isilinganiso esingu-100%, sinesisebenzi esengeziwe sokuhlola futhi sihlola ucezu ngalunye ngokucophelela. Singanikeza ngokuphepha kwe-5: isitifiketi esingu-1 mahhala uma kunesidingo samakhasimende.
Imboni yethu inamandla amakhulu okukhiqiza, ingenza ukulethwa okusheshayo esimweni esijwayelekile.
Langaphambilini Umoya Bulk Bag HV62
Olandelayo: Tubular Double Warp Bulk Isikhwama HT-46
I-China Hot Sale 1500kg Usimende Fibc
I-Self Standing Fibc
U + 2 Panel Bulk Bag HU-15
Q Isikhwama Baffle Bag HB-20
UV ziphathwe izinga okusezingeni Indwangu izihibe s nezimo ...
Q Isikhwama se-Baffle Bag HB-21
Okugcwele Belt Bulk Bag HF-9
Okugcwele Belt Bulk Bag HF-11